> Resource> Mac> Ezvid maka Mac: Mepụta Slideshows na Home Videos Easily na Mac OS
Ezvid bụ ihe dị mfe ma na ngwa ngwa video onye maka Windows ọrụ ike ma na-òkè videos ozugbo na YouTube. Mere maka ma ọkachamara na-amu amu ọrụ, ọ pụrụ inyere gị ike ịtụnanya slideshows na n'ụlọ fim na nkeji kama awa. Ọ bụrụ na ị ga-esi mee Ezvid, na dị nnọọ kwagara a Mac, i nwere ike na-eche ma Ezvid na-abịa a Mac version. N'ụzọ dị mwute, Ezvid anaghị akwado Mac na dị ka a n'ihi na ị ga-ahụ na a video omume nke yiri Ezivd. Ọ bụrụ na nke a bụ gị ikpe, enye Wondershare Filmora (mbụ Wondershare Video Editor) maka Mac a-agbalị. Ọ nwere ike na-arụ ọrụ dị ka a dị ike Ezivd maka Mac site na ọrụ nke afọ. Lelee video nkuzi banyere otú dezie vidiyo na Mac mbụ.
1 kensinammuo interface ma kpọmkwem video edezi
Wondershare Filmora (mbụ Wondershare Video Editor) maka Mac atụmatụ nkecha interface na kemfe edezi ngwaọrụ. Ọ na-enye a media nchọgharị maka ị mbubata gị niile Obodo video, ọdịyo ma ọ bụ ka oyiyi conveniently. Nanị site ikpuru-na-dobe, ị pụrụ ime ndokwa na hazie vidio maka mfe edezi. All video edezi dabeere na usoro iheomume, nke na-ahapụ gị dezie video & audio comfortably. Ọzọkwa, ọ na-enye n'akụkụ-na-n'akụkụ Michael window. Ihe ị na-ahụ bụ ihe ị ga-esi.
2 Eme gị video n'otu ntabi na Mac
E wezụga ihe niile nkịtị edezi ngwaọrụ dị ka ubi, bugharia, ewepụtụ, gbawara n'etiti, tinye voiceover na ndabere music, Ezivd maka Mac na-enyere i metụ elu videos ndị sara mbara ndepụta nke fabulous video edits. Ka ihe atụ, i nwere ike ide Mozis zoo zoo onwe onye ma ọ nwebiisinka Ama, ike a nso-elu na-eguzo si ìgwè mmadụ, kpatụ ebre ọsọ dị ka 2x ngwa ngwa na-eme ka fun. Ka naanị atụtụ ọkacha mmasị gị mmetụta si ọgaranya ikwu n'ụzọ, visual nzacha, intros / e si nweta, akụkụ Akwụkwọ Nsọ, ụda na ndị ọzọ.
3 Share okokụre video na n'ụwa nile
Mgbe ị na-rụchaa video edezi, e nwere a dịgasị iche iche nke nhọrọ dị mbupụ gị e kere eke. Dị ka Ezvid, ị nwere ike mfe bulite gị masterpiece ka YouTube kpọmkwem site a Ezvid ọzọ, nakwa dị ka a ozi Facebook na Twitter. Ma ọ bụ chekwaa ya na kọmputa na niile SD na HD formats dị ka AVI, WMV, MOV, MKV, na na. Ọzọ mgbe, ị ga-ahọrọ na na na obere ngwaọrụ dị ka iPad, iPhone, Samsung Galaxy SIII, wdg Ọbụna ọkụ DVD ma ọ bụ DVD nchekwa a gụnyere na a software maka na-adịgide adịgide ichebe.